Thursday July 16, 2020 - 19:23:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaaladda wadanka Itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa faraha kasii baxaysa kadib markii ay sii xoogeysteen dibad baxyada rabshadaha wata oo ay dagaallo barbar socdaan.
Saraakiisha hoggaaminaysa kacdoonnada shacbiga ah ayaa soo bandhigay waxyar oo kamid ah burburka iyo halaagga ka dhashay iska hor'imaadyada ka holcaya gobolka Oromia oo ah meesha ugu daran ee ay dhibaatadu ka jirto.
Ragga Firfircoon ee kacdoonka Hoggaaminaya ayaa ku eedeeyay dowladda uu madaxa ka yahay Korneel Abiy Axmed in ay gummaad ugeysanayso shacabka sida nabad gelya ah dibad baxyada udhigaya, warbaahinta ayaa baahisay muuqaallo banaanka soo dhigayay xaaladda dhabta ah ee wadanka jirta.
Tirakoobyo aan rasmi ahayn oo ay soo saareen hoggaamiyaasha mucaaradka Oromada ayay ku sheegeen in dhimashada ka dhalatay rabshadaha socda ay ku dhowyihiin lix boqol oo qof.
Dhinaca kale saraakiisha qowmiyadda Tikreega ayaa iyana digniino udiray xukuumadda Itoobiya waxayna ku hanjabeen in ay kacdoonka dhinac ka noqon doonaan haddii aan wadanka laga dhaqangelin isbedel lataaban karo.
Dr. Debression oo ah madaxweynaha maamulka Tikreega ayaa yeeriyay jarraska digniinta ee ku wajahan Abiy Axmed isagoo hadal qaaday waxa dalka ka socda.
isagoo hadal ka jeedinayay madashii Baarlamanka ee ayuu yiri sidaan "Ma jirto awood dunnida guudkeeda saaran oo naga hor istaagi karta innaan ismaamulno islamarkaana doorashada wakhtigeeda ku qabsano".
Haddalkan ayaa kusoo beegmaya xili dalka doorashadii dib loo dhigay, islamarkaana Dawladda dhexe marar baddan sheegtay innaysan kililadu doorasho ugaara qabsan kari Maamulka Tigreega ayaa maanta Komishin doorasho oo ugaara Barlamankooda ka ansixiyay.
Dabeyllaha siyaasadeed ee Itoobiya ka jira ayaa ku bishaaraynaya in ay dhabarka isku jeediyeen qowmiyadihii talada wadanka ku midaysnaa waxaana muuqata in qowmiyad walba ay gooni uwadato halgan ay maamul ku dhisanayso.
Hoos ka daawo Video+ sawirro